Irente: Igama elithi "P" | Martech Zone
Irente: Igama elithi "P"
NgoLwesithathu, Julayi 2, 2014 Douglas Karr
Abathengisi abakhulu bayakonwabela ukuthetha ngako Buyela kwi Investment. Izolo, bendizimase intlanganiso nenkampani ethengisa izindlu nomhlaba ebinemiceli mngeni ngesicwangciso sabo sewebhu. Indawo yabo yeencwadana zazingahambi kakhulu kwaye zazichitha imali eninzi kwinani leenkqubo zangaphandle zokuqhuba zikhokelela kwintengiso yabo. Ingxaki esiyichongileyo yayikukuba babehlawulela zonke ezo nkampani ukuze zikhuphisane nazo kwi-intanethi.
Ukuqhuba sibuyele umva ukusuka kwinqanaba labo lokuguqula kunye nengeniso ngokusondeleyo, sincedile ukubona ukuba luhlobo luni lwempembelelo kwisicwangciso esiliqili sentengiso kwi-Intanethi esinokuyenza ukuqhuba iindleko ngokukhokelela ezantsi, ukwandisa inani lezikhokelo, kunye nokunciphisa ukuxhomekeka kwabo kubantu besithathu. Ayisiyo inkqubo yasebusuku- ifuna amandla kunye nesicwangciso sexesha elide ukwenza utshintsho. Oko kubonakala ngathi kuhlala kungumceli mngeni kwiinkampani ezinomlutha kwimithombo yesithathu ekhokelayo.
Bonwabile kakhulu yintlanganiso kwaye kungekudala siza kulandela amanyathelo alandelayo. Njengokuba bendithetha nomlingane malunga nayo, nangona kunjalo, andikwazi ukuzibamba ndicinga ukuba yonke le ntetho yotyalo-mali, ukubuyela kutyalo-mali, inkcitho yentengiso, iindleko zentengiso… konke oko kubhekisele kwisicwangciso esinye. Ukuphuhlisa uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa, kuya kufuneka wandise inzuzo kwinkampani.
Emva kwexesha, bendifunda kwincoko yentlalo malunga nokuba iinkampani zikhathalela njani kuphela inzuzo. Andivumi tu. I-99% yeenkampani esisebenze nazo-ukusuka kwiinkampani ezinkulu zoluntu ukuya kwezona zincinci zincinci-zilinganisiwe ngenzuzo kodwa bekungaqhelekanga umlinganiso wazo wempumelelo. Ngapha koko, ukufunyanwa kwabathengi, ukugcinwa kwabathengi, inzuzo yabasebenzi, igunya, ukuthembela, kunye nesabelo sentengiso bekuhlala kuphezulu kwi-radar njengoko besithethile ngokunceda iinkampani. Andikaze ndibenayo inkampani eza kum kwaye ndiyitsho loo nto Kufuneka sonyuse inzuzo-unganceda njani?
Oko bekuthethile, kuyacaphukisa ukuba igama elithi "P" liye laba yinto ehlebelwayo kunokuba ikhwaze kweyona ntaba inkulu. Inzuzo ayifani nokubawa. Inzuzo yiyo eyenza ukuba iinkampani ziqeshe, zenze ukuba iinkampani zikhule, zenze ukuba iinkampani zikwazi ukutyala imali kuphando nakuphuhliso, kwaye ekugqibeleni - inzuzo yile nto imibutho irhafu kuyo. Ngamanye amagama, okukhona inyusa umgangatho wenkampani, kokukhona kubangcono kuqoqosho lwethu luphela. Ingeniso ephezulu ivelisa ingeniso ephezulu yerhafu ukuxhasa abemi bethu abahlwempuzekileyo. Inzuzo ephezulu yenza ukuba iinkampani ezinjengezam zikhule kwaye zenze ithuba lokuqhubela phambili kunye nengqesho kwabo bafuna umsebenzi okanye abafuna ukuqhubela phambili.
Ukubawa kuxa iinkampani zixhaphaza ubutyebi ngokubeka abasebenzi bazo, abathengi kunye noluntu. Iinkampani ezinenzuzo kakhulu endizaziyo zihlawula abasebenzi bazo kakuhle, ziyaqhubeka nokuphucula amava kubathengi bazo, kwaye batyale imali kwaye banikele kakhulu kuluntu. Kwaye bayenza ngokuzithandela ukuqokelela ubutyebi, bengabuthathi.
Andiqondi ukuba kufuneka sithule malunga nentengiso kunye nefuthe layo kwinzuzo. Ndicinga ukuba kufuneka sibhiyozele inzuzo… enkulu, ngcono. Kwaye akufuneki ukuba sifune iindlela zokunciphisa ngerhafu kunye nommiselo. Ayichasani.
Nalu ukonyusa inzuzo kunye nomda wenzuzo yakho!
tags: Iindleko zentengisomibuthoukunyolukautyalo-maliurhweboinkcitho yentengisoinzuzoukubuya kutyalo mali